के हो धनतेरस ? « Janata Samachar
के हो धनतेरस ?
प्रकाशित मिति :5November, 2018 8:58 am
हाम्रा पर्वमध्ये लक्ष्मीपूजाको बेग्लै र खास महत्व छ । धनको आश कसलाई हुँदैन ? धनीदेखि गरिबसम्म हरेक मान्छे धन कमाउन दिनरात मेहेनत गर्छन् । र, त्यही धनकी देवी हुन् माता लक्ष्मी । तर धन दिन्छ कसले ? के तपाईंलाई थाहा छ ? धन बाँड्ने काम हो भगवान कुबेरको । लक्ष्मीपूजा भन्दा पहिले धनतेरस आउँछ र धनतेरसको पूजामा लक्ष्मी, गणेश र कुबेरको पूजा गर्नुको एउटा बेग्लै विशेष महत्व छ ।
धनतेरस भनेको के हो ? नाम नै सुनेर स्पष्ट हुन्छ कि धनलाई तेह्र गुणा बढाउने र धनमा वृद्धि हुने दिन हो धनतेरस । यसलाई अझ स्पष्ट गर्ने हो भने धनको अर्थ समृद्धि र तेरसको अर्थ तेह्र् दिन । यो पर्व नेपालको तराइमा मात्र नभइ समस्त भारतमा पनि श्रद्घासँग मनाइन्छ । र, खास गरेर व्यवसायीहरुले अझ बढी श्रद्धाले मनाउँछन् । आजको दिन समुन्द्र मन्थनक्रममा धन्वन्तरीको उत्पत्ति भएको थियो । र, आजैका दिन धनका देवता कुबेरको जन्मोत्सव पनि भएकाले यसलाइ बढी महत्वका साथ पर्वको स्वरुप मनाइन्छ ।
धनतेरस प्रत्येक वर्ष कात्तिक कृष्णपक्षको त्रयोदशी अथवा कागतिहारका दिन मनाउने प्रचलन छ । धनतेरसकै दिन लक्ष्मीपूजा र माताको स्वागतको तयारी आजकै दिनबाट शुरु हुन्छ । माता लक्ष्मीको सानो घरभित्र रंगोलीको पैताला बनाइन्छ । र, पुस्तौँदेखि नै परम्पराअनुसार आजका दिन सन्ध्याकालका यमराजलाई इंगित गरी एउटा दियो बालेर घरको मूल दैलोमा राखिन्छ । र, यो गर्नुको अर्थ हो कि यमराज घरदेखि बाहिर रहोस्, कसैलाइ दुःखकष्ट नपुर्याओस् भनी अनुरोध र पुजा गरिन्छ । यो धार्मिक मान्यताले आममान्छेको स्वास्थ्य र दीर्घायुसँग सम्बन्ध राख्दछ । हरेक पर्व, व्रतसँग एउटा कथा जोडिएको हुन्छ र धनतेरससँग पनि एउटा कथा जोडिएको छ ।
एकजना हिमालय नाम भएका राजा थिए । उनी आफ्ना छोराको जन्मकुण्डली बनाउन ज्योतिषकहाँ पुगे, ज्योतिषले भने, ‘विवाह गरेको ठीक चौथो दिनमा राजाका छोरालाइ सर्पको टोकाइले मृत्यु हुनेछ ।’ समय बित्यो राजाको छोराको विवाह त भयो तर जब हिमालयकी बुहारीले यो कुरा थाहा पाइन्, त्यसपछि आफ्ना श्रीमानलाई यमराजको प्रकोपबाट मुक्त गर्न पतिको कोठाबाहिर घरका सबै गहनाको थुप्रो बनाएर पहाड जस्तै अग्लो चुली बनाइन् र पतिलाइ निन्द्रा नआओस् भनेर गीत, भजन र कथा सुनाउन थालिन् । रात्रीकालमा यमराज सर्पको रुप धारण गरी हिमालयका छोरालाई डस्ने विचारले आइपुगे तर गहनाको पहाडलाई तिनले नाघ्न सकेनन् र यमराजलाइ खाली हात फर्कनुपर्यो ।
यसरी राजकुमारीले आफना पतिको जीवनरक्षा गरिन् । यही मान्यतामा मानिसहरु आफ्नो घरका सदस्यको आयु, आरोग्य र सुखसमृद्धिका निम्ति धन त्रयोदशी अर्थात धनतेरसका दिन आफ्ना घर बाहिर यमराजलाई बाटो छेक्न एउटा दियो बाल्छन् । हाम्रो आर्य संस्कृतिमा स्वास्थ्यलाई धनसम्पत्ति भन्दा महत्वपूर्ण बस्तुका रुपमा लिइन्छ, त्यसैले पनि धनकी देवी लक्ष्मीको उपासनासँग सम्बद्ध यस पर्वमा सबैभन्दा पहिले यमराजको उपासना गरिन्छ । आजका दिन सुनचाँदीका सिक्का,भाँडाकुडा,आभूषण किन्ने परम्परा छ ।
हिजोआज मोटरसाइकल, मोबाइल, कम्प्युटर, साइकल जस्ता बस्तु खरिद गर्न पनि यसै दिनलाई पर्खने चलन छ । यस पर्वमा धनी गरिब सबैले आआफनो क्षमताअनुसार केही न केही किन्छन् । जसको सामथ्र्य छ, उसले त भान्साका पूरा समान नै फेर्छन् र जो गरिब छ उसले एउटा स्टिलका थाल भए पनि किन्छन् । आजका दिन कुचो, नांग्लो लिनुलाई अझ राम्रो मानिन्छ किनभने हाम्रो मिथिलामा मान्यता छ कि, कुचो, नांग्लो माता लक्ष्मी हुन् । शारांसमा भन्दा आआफना सामर्थ्य अनुकुल सम्रग भारत र नेपालको तराई क्षेत्रमा यस पर्वलाई मनाइन्छ ।
बिहान ५ः०० स्टेशन आइडी–राष्ट्रिय गान ५ः०२ योग दर्शन ५ः३० तीर्थ पर्यटन ५ः५५ विज्ञापन–प्रोमो ६ः०० जनता
२०७५ माघ ५ गतेको राशिफल
मेषः घर बाहिर दिन बित्नेछ, भ्रातृसुख रहनेछ । वृषः पाहुना बढ्नेछन्, भोजन सुख मिल्नेछ ।
आइ हेट नेपाली ल्याङ्ग्वेज !
जोसेफ शाही काठमाडौं । भाषा हाम्रो पहिचानसँग जोडिएको विषय हो । दुनियाँकै सबैभन्दा धनी भाषा
प्रदेश २ का जनप्रतिनिधिमा बढ्दो अराजकता
अहिले बलात्कार गरेका आरोपीसमेत मेरो काँधमा फलानो नेताको हात छ र कुन कानुनले मेरो के
मेषः घर बाहिर दिन बित्नेछ, भ्रातृसुख रहनेछ । वृषः पाहुना बढ्नेछन्, भोजन सुख मिल्नेछ । मिथुनः प्रशन्नता बढ्नेछ, आफन्त भेटघाट…
जोसेफ शाही काठमाडौं । भाषा हाम्रो पहिचानसँग जोडिएको विषय हो । दुनियाँकै सबैभन्दा धनी भाषा मानिने संस्कृत भाषाको जगमा विकास…
अहिले बलात्कार गरेका आरोपीसमेत मेरो काँधमा फलानो नेताको हात छ र कुन कानुनले मेरो के बिगार्न सक्छ भनेर धाक लगाएर…
पाँच महिनामा ६ खर्ब व्यापार घाटा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गतवर्षको यही अवधिमा…
‘ऐना मात्र हेरेर अगाडि बढ्दैन देश’
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको छ । बैठकमा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाप्रति उत्तर…
कपिलको ‘शो’मा महिलामाथि दुर्व्यवहार : भनिन्–‘म बुवासँग आएकी छु’
बसमा ट्रक ठोक्किँदा ३ को मृत्यु, ३ घाइते
पुराना भाँडा किन्ने महिलाले लुटिन् १० तोला सुन
मधेश अन्दोलनको १२ वर्ष: मधेशीले के पाए, के गुमाए ?
५२ बालबालिका हराए
यी हुन् ११ महिनामा सरकारका २९ उपलब्धि
‘राजा’को छलले गाउँ लिलामीमा
देवताहरूले स्वर्गलोकको बाटो समाते